Cabdulaahi Yuusuf oo ka walwalsan Xiriirka sii xoogeysanaya
????Qaybta: 1aad | 2aad
Wararkii: Dec 7, 2006
Cabdulaahi Yuusuf oo ka walwalsan Xiriirka sii xoogeysanaya .
Ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa Safka hore Bandiiradleey oo laga soo ..
Dowladda Kenya oo la filayo in maalmaha soo socda ay xayirada ka qaado
Dalka Suudaan oo uu ka socdo Shir looga arrimaha soomaaliaya ..
Xarunta Ismaaciil Jimcaale oo siminaar u soo gabagabeysey..
Muqdisho: Midowga maxkamadaha islaamka oo ku tilmaamay qaadista cuna qabadaynta hubka somalia mid dhinac ah.
Midowga maxkamadaha Islaamka ee magaalada Muqdisho ayaa ku tilmamay qaadista cuna qabadaynta hubka ee saarnayd somalia in ay tahay mid dhinac u xaglinaysa islamarkaana aan loo baahnayn in xilligan la qaado cuna qabadaynta hubka saaran somalia.
Midowga maxkamadaha ayaa sheegay in somalia uu hub ka buuxo islamakraana ay tani sii kordhinayso hubkii ku jiray gacanta shacabka balse aysan wax faa'iido ah u keenayn somalia xayiraadan hada la qaaday.
Masuul u hadal maxkamadaha Islaamka ayaa ku tilmaamay in aysan jirin sabab loo qaado cuna qabataynta hubka saaran somalia xilligan maadaama ay hada somalia tahay nabad islamarkaana loo baahan yahay in nabada iyo kala danbaynta ka jirta somalia la sii xoojiyo iyada oo laga taageerayo dhinacyada dib u heshiisiinta, dhaqaalaha, hormarka sidaasna ay somalia xal dawlad loo wada dhan yahay lagu gaarikaray.
Shiikh abuu mansuur ayaa ku tilmaamay go'aankan mid dhinac ah islamarkaana aan xiligan loo baahnayn in la qaado cuna qabataynta hubka isaga oo shiikha uu sheegay dhinaca kalena in ay ka soo horjeedaan ciidan nabad ilaalin ah ee la keeno dalka somalia saf hore iyo kuwa danbe noocay doonaanba ha ahaadeene.
culimo badan oo ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadeesa oo la soo xiriiray SomaliTalk.com ee magaalada Garowe ayaa cadeeyay mowqifkooda ku aadan go'aanka ka soo baxay Qaramada Midowbay iyaga oo sheegay in ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan in somalia la keeno ciidamo nabad ilaalin ah.
Culimadaan ayaa ku tilmaantay go'aanka Qaramada Midowbay mid aan suurta gal ahayn in xiligan la qaado cuna qabataynta hubka saaran somalia mudada ka badan 14 sano iyo sidoo kale in la keeno ciidamo nabad illaalin ah kuwaasoo bay dheheen aan gabi ahaanba ka soo horjeedno.
Culimadan ayaa sidoo kale sheegay in ay dagaal la gali doonaan hadii la keeno dalka gudihiisa ciidan sida la sheegay loo soo dirayo somalia noocay doonaanba ha ahaadeene.
Bandiiradley: Iska hor imaad dhexmaray maxkamdaha iyo Cabdi qaybdiid oo ay taageerayaan puntland iyo ethiopia.
Dagaal aan sidaa u xoogbadnayn oo socday qadar 30 daqiiqo ah ayaa habeenimadii xalay ku dhexmaray Ciidamada Midowga Maxkamadaha ee jooga aaga Bandiiradley iyo kuwa Cabdi xasan cawaale Qaybdiid oo ay taageerayaan Ciidamada puntland iyo kuwa Ethiopia.
Dagaalkan ayaa la sheegay in uu ku dhintay nin markii hore ku dhaawacmay dagaalka oo ahaa dhinaca puntland ninkan dhintay ayaa ahaa nin farsamo yaqaan goomiiste ah islamarkaana samayn jiray baabuurta iskaraabka ah ama xumaada.
Nin u hadlay puntland ayaa ku soo koobay in khasaaraha dhankooda soogaaray uu ay tahay nin dhaawac ah iyo mid dhaawac u dhintay sidoo kalena ay dhinaca kale ay gaarsiiyeen khasaare badan isaga oo ka gaabsaday in uu faahfaahiyo inta ay la egtahay khasaaraha dhinaca kale gaaray.
Mas'uul u hadlay maxakamadaha ayaa isna sheegay in aan dhinacooda wax khasaaro ah soo gaarin islamrkaana ay dhinaca kale gaarsiiyeen khasaare badan oo ay ka gubeen halgaari tigniko ah askarna ay ka dileen qaar kalena ay ka dhaawaceen.
Ilaa iyo hada wali wax rasmi ah oo ku saabsan dagaalkii xalay dhexmaray dhinacyada isku horfadhiya Bandiiradley ma cadda mana jirto cid si cad u sheegatay eeda dagaalka dhinacba dhinac ayuu ku eedaynayaa in uu duulaanku isagu bilaabay mana jiraan illo kale oo xaqiijinaya sida ay wax u kala gaareen labada dhinac ee dirirtu dhexmartay habeenkii xalay ahayd.
Gudoomiyaha Golaha maxaakiimta Sheekh Shariif oo Gaashaanka u daruuray go'aanka golaha amaanka kasoo baxay. Gudoomiyaha golaha fulinta maxkamadaha islaamka Somaliya Sheekh Shariif sheekh Axmed ayaa Gaashaanka u daruuray go'aanka golaha amaanka ee Q.M uu ku gaadhay in ciidamo shisheeye lagu keeno Somaliya islamarkaana shaaca ka Qaaday inay la dagaalami doonaan ciidamadaas.
Sidoo kale gudoomiyaha golaha fulinta maxkamadaha islaamka Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u waramay TV ga aljazeera ayaa cod dheer ku sheegay in mareykanka uu doonayo in uu ka aargoosto shacabka Soomaaliyeed taasina ay iska cadahay waxaanu u sheegaynaa maraykanka inuu hadii uu isku dayo inuu fara gelin sameeyo inuu ku halaagsami doono.
SHeikha shariif axmed ayaa kaloo sheegay in maxkamadaha islaamka Somaliya ay u diyaar garoobeen in ay la dagaalamaan ciidamo kasta oo shisheeye oo soo gala gudaha Somaliya, isla markaana ay xoog kaga saari doonaan hadii ay soo galaan gudaha Somaliya mana ka yeeli doono inaan cid kale uga hibaysano dalkayaga iyo dadkayaga .
Sidoo kale sheikh sharif sheikh axmed oo ay ka muuqato xamaasadi ayaa cadeeyey in Golaha Maxaakiimtu ay doonayayaan nabad ka dhalata geeska africa si gaar ahna Somaliya, isla markaana aysan jirin cid si gaar ah ay dagaalo ugula jiraan, balse hadii lagu soo xadgudbo ay iska difaaci doonaan, cidii kusoo duushana ay jab iyo halaag kala kulmi doonaan.
SHeikh shariif ayaa intaas ku daray ''" Waxa ay doonayaan golaha amaanku inay dhinac garab siiyaan, dhinacna ay weeraraan, hadana waxa ay doonayaan in wada hadal iyo wada xaajood ay inagu booriyaan, arintaasina maaha mid suurto gal ah noqonaysa " ayuu yidhi Sheekh Shariif sheikh axmed.
Dhinaca kale Madaxa amaanka golaha maxaakiimta Sheekh Yuusuf Indho cadde Ayaa ku celiyey Baaqisii ahaa '''waxaanu muslimiinta caalamka ka codasanaynaa inay noosoo gurmadaan si ay noogala difaacaan ciidamada shiheeye ee doonaya inay qabsadaan dalka soomaaliya .
Si kastaba ha ahaatee Masuuliyiinta sarsare ee Golaha maxaakiimta islaamka ayaa cod dheer ku sheegay inaysan maranaba ka raali noqon doonin ciidamo shisheeye oo gaallo ah oo doonaya dalka inay u horseedaan dhibaato iyo amaan xumo islamarkaana caddeeyey inay ka hortegi doonaan cid kasta oo cagta soo dhigta ciida soomaaliyeed.
Golaha Ammaanka oo Ansixiyey Ciidamo Afrikaan ah oo aysan ku jirin kuwa Dalalka Xadka la leh Soomaaliya...
Golaha Ammaanka ee Qaramada midoobey ayaa Arbacadii (Dec 6) ansixiyey ciidamo la keeno Soomaaliya, kuwaas oo aysan ku jirin dalalka Soomaaliya xuduuda la leh - Ciidamada aan loo ogolayn Soomaaliya waa kuwa IGASOM ee ay ku jiraan kuwa Itoobiya.
Waxa kale oo golaha Ammaanku ansixiyeen in la qaado qayb ka mid ah cunaqabataynta hubka, oo lagu sheegay in cunaqabataynta la qaaday ay ku xadidan tahay qalabka iyo hubka ciidamadan cusub.
Golaha Ammaanku ee UN waxa uu sheegay in ujeedada ciidankan cusub ay tahay : Difaacida Hay'adaha Federaalka Kumeelgaalka ah (HFKMG) -- waa sida UN hadalka u dhigtay'e -- oo ay ka mid tahay Dowladda, tababarka ciidankeeda, ammaanka Baydhabo, indha ku haynta wadahadalada u dhexeeta HFKMG iyo Maxaakiimta Islaamkiga ah, iyo xaqiijinta socdaalka iyo ammaanka dhammaan ka qayb galayaasha wadahadalada Nabadda.
Horay waxay maxkamadaha Islaamigu u sheegeen in aysan aqbali doonin ciidamada shisheeye ee soo gala dalka. Waxaana hadda taas sii dheer in qaraarka cusub ee Golaha Ammaanku uu dhabar jab ku jahay hamigii Zenawi oo adeegsanayey erayada Cali Maxamed Geeddi ee ahaa in lala dagaalamo Maxkamadaha. Waayo Golaha Ammaanku waxay diideen in ciidamada cusub ay qayb ka noqdaan wadamada xadka la leh Soomaaliya (oo ay ugu horayso Itoobiya), waxa kale oo golaha Ammaanku sheegeen in ay tallaabo ka qaadi doonaan dhinacii isku daya in uu is hor taago nabadda - Haddaba la arki doonee in Golaha Ammaanku uu ciidamada Itoobiya ku amro in ay ka baxaan Soomaaliya maadaama ciidamadaasi aysan qayb ka ahayn kuwo Qaramada Midoobey ogol yihiin in ay joogaan Soomaaliya, haddii ay ka bixi waayaana la arki doonee in UN ay tallaabo ka qaado. [ISHA: UN]
Madaxwayne C/laahi Yuusuf Axmed ayaa waxaa la sheegay in si aad ah uga walwalsan yahay xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Ra?iisulwasaare Cali Max?ed Geedi iyo Ra?iisul waasraha Itoobiya ka dib markii waxyaabo fara badan aan lagala tashan Madaxwayne C/laahi Yuusuf Axmed ay isla soo qaadeen Ra?iisul wasaaraha Itoobiya iyo Ra?iisul Cali Max?ed, dhawaan ayaan Madaxwayne C/laahi Yuusuf Axmed aan lagala tashan ka dib markii uu codsaday in la xaddido tirada Ciidamada Itoobiya oo ku sugan Soomaaliya ka gadaal markii Ra?iisul Cali Max?ed Geedi uu o golaaday in aan wax fara galin ah aan lagu sameynin tirada Ciidamada Itoobiay ee ku sugan Soomaaliya.
Markii Maxaakiimta ay gebi ahaanba joojiyeen ama ay mamnuuceen ka ganacsiga Qaadka iyo cunistiisa ayaa haddana mararka qaarkood, waxaa si dhuumaaleysi ah oo aad u adag qaad lagu soo geliyaa magaalada Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya Gobolada dhexe waxa ay sheegayaan in Ciidamdii Itoobiya ee ku sugan aaga Dagaari dib loogu caliyey Magaalada Gaalkacyo, waxaana Ciidanka lagu Xareeyey xero ku taala duleedka Magaalada Gaalkacyo.
Ilaa hadda lama faafaahin sababaha Ciidamadaasi looga soo saaray aaga hore ee isku hor fadhiyeen Ciidamada Maamul Goboleedka Puntland oo gacan ka helaya Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Maxaakiimta Islaamiga ah.
Warar ayaa wax sheegayeen in sababaha Ciidamada itoobiya loo soo saaray safka hore ay tahay ka dab markii Maamulka Puntland uu cadaadis kaga yimid Shacabka Reer Puntland oo sheegay in aysan ogalaandoonin in ay Ciidamo Itoobiyaan ah ay ku sugnaadaan Deegaanadooda.
Waxaa la shaagay in Maamulka Puntland uu cabsi ka qabo in kacdoon ka dhan ah Ciidamo itoobiya ay sameeyaan shacabka ku nool Maamulka Puntland, sidoo kale Maamul Goboleedka Puntland ee uu Madaxda u yahay Cadde Muuse uu iska dhaga tiray codsiyo oga imaanaayo Shacabka Puntland oo ku saabsan in Maamul Goboleedka lagu dhaqo shareecada Islaamka, ayadoo ay meel mari weysay hadalkii dhawaan ka soo yeeray Cadde Muuse oo ahaaa in Maamul Goboleedka lagu dhaqi doono Shareecada Islaamka.
Dowladda Kenya oo la filayo in maalmaha soo socda ay xayirada ka qaado..
Markii Magaalada Jabuuti uu heshiis ku dhex maray dhaman Wadamada IGAD iyo Maxaakiimta Islaamiga ayaa warar aanu ka helnay magaalada Nayroobi waxay sheegayaan in Dowladda Kenya ay maalmaha soo socda ay xayiraada ka qaadi doonto duulimaadkii Diyaaraduhu ay ku tagi jireen gobalada ay Maamulaan Maxaakiimta Islaamiga ah.
Dowladda Kenya ayaa markii u joojisay duulimaadyadii Soomaaliya gaar ahaan Gobalada ay maamulaan Maxaakiimta islaamiga ah arrimo siyaasadeed, hase yeeshee kulan gaar ah oo ay Jabuuti ku yeesheen mas?uuliyiin ka tirsan Maxaakiimta iyo Dowladda Kenya ayaa lagu dhameeyay khilaafkaasi.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa baahi weyn u qaba in xayiraada laga qaado diyaaradaha imaan jiray Soomaaliya hase yeeshee, waxaana labada dhinac ay isku afgaan wayeen waxaa ka mid ah in xayiraada laga qaado ka ganacsigii Qaadka oo Dowladda Kenya ay faa?iido weyn ku qabtay.
Waxaa Dalka Suudaan ka socda shirka looga hadalayo arrimaha Soomaaliya iyo arrimo oo la xiriiro Qaaradda Afrika waxaana ka qaybgalaya Masuuliyiin ka tirsan Qaaradda Afrika. Shirkaan ayaa waxaa warbixin ka soo jeediyey Dowladda Suudaan oo sheegtay in wadahadal u dhexeeyey Maxaakiimta Islaamiga ah iyo Dowladda fedaraalka ah ee haatan marayaan meel aad u wanaagsan lana filiyo in mar kale la ?isugu yimaado.
Waxaa kaloo shirkaas looga hadlay sidii loo baajin lahaa dagaal dhexmara Dowladda Itoobiya iyo Golaha Maxaakiimta, waxaa kaloo la filayaa in Ergo Nabadeed loo soo diro Dowladda fedaraalka ah iyo Golaha Maxaakiimta Islaamiga ah si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labadaasi dhinac.
Waxaa maalinta shalay ahayd Hotel Ambaasadoor ee Magaalada Muqdisho lagu soo gaban-gabeeyey Siminaar socday Muddo 3-Maalmood oo ay soo qabanqaabisay Xarunta Ismaaciil Jimcaale ee Xaquuqda Aadanaha waxaana maalgalinayey Hay?adda NED ee fadhigeedo yahay carigga Maraykanka, waxaana ka qaybgalayey Odayaal Dhaqameedyo, Culumaa?udiin iyo xubno ka socday qaybaha warbaahinta. Siminaarkaan ayaa waxaa lagu baranayey casharro ay ka mid ahaayeen Habka Dowlad wanaaga, sida loo xali karo khilaafaadka, iyo Dimoq-raadiyadda waxaana casharro ka bixinayey Macallimiin uu ka mid ahaa Ustaad Ibraahiim oo asaga si aad uga dheeraaday xalinta khilaafaadka. Gaba-gabadii siminaarkaasi waxaa ka hadlay Axmed Wahliye Siyaad oo sheegay in Xarunta Ismaaciil Jimcaale oo markasta u taagan tahay sidii ay Bulshada ugu horseedi lahayd Nabad. Waxaa kaloo ka hadaly Dheere Shiikhey oo asaga ku hadlaya Magaca ka qaybgalayaasha wuxuuna u mahadceliyey Xarunta Ismaaciil Jimcaale
SEMINAAR LAGU BARANAYAY XALLINTA KHILAAFAADKA IYO DOWLAD WANAAGGA OO LAGU SOO GABAGABEEYAY HOTEL AMBASSADOR
Seminaar soconayay muddo seddax maalmood ah oo ay ka qeyb qaadanayeen xubno isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada sida oday dhaqameedyada, culimaa?udiinka iyo qaar ka mid ah saxaafadda maxalliga ah ee Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay hotel Ambasador ee magaalada Muqdisho.
Seminaarkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay?adda Dr. Ismaaciil Jimcaale ee xuquuqda aadanaha, ayna ka taakuleysay hay?adda lagu magacaabo National Endowment for Democracy ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka, ayaa waxaa muddadii uu socday si weyn loogu lafa guray qodobbo ay ka mid ahaayeen: Xallinta khilaafaadka bulshada, dowlad wanaagga iyo dimoqraadiyadda qaabka uu u adeegsado Islaamka iyo habka ugu wanaagsan ee hogaaminta bulshada.
Seminaarkan intii uu socday waxaa casharro ka bixiyay macallimiin ay ka mid yihiin Ibraahim Max?ed Cumar, Bashiir Ismaaciil Macallin Ciise, Max?ed Xasan Casir, Max?ed Max?ud Sheekh oo dhammaantood ka wada socday hay?adda CORA, ururka tababarayaasha bulshada iyo wacyigelinta arrimaha Aids-ka.
Seminaarkan oo si weyn loogu lafa guray qodobadii looga hadlay ayaa waxaa laysku tusaaleeyay doorka oday dhaqameedyada, culimaa?udiinka iyo saxaafaddaba kaga aaddan xalinta khilaafaadka bulshada iyo sida loo heli karo hogaamiye wanaagsan iyo sida ay is beddel ugu keeni karaan bulshada.
Seminaarkan intii uu socday oo aheyd seddax maalmood ayaa waxaa laga soo jeediyay fikrado kala duwan oo ku aaddan dimoqraadiyadda iyo sida laysku waafajin karo diinta islaamka iyo in laga qaato inta ka khuseysa shareecada Islaamka iyo qodobbo kale.
Gabagabadii seminaarkan ayaa waxaa ka hadlay Cabdi Weheliye Siyaad oo xubin ka ah guddiga Fulinta ee hay?adda Xuquuqda Aadanaha Dr. Ismaaciil Jimcaale, wuxuuna ku guubaabiyay xubnihii ka qeyb galay inay ku dabbakhaan waxyaabihii ay ka kororsadeen muddadii uu socday, wixii xunna iska dhaafaan, wixii wanaag ahna ay bulshada u gudbiyaan, waxaana goob joog ka ahaa gabagabadiisii guddoomiyaha hay?adda Xuquuqda Aadanaha Dr. Ismaaciil Maryan Awreeye, Madaxa barnaamijyada C/laahi Calas Jimcaale iyo xubno ka tirsan hay?addaas.
Gabagabadii seminaarka ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah ka qeyb galayaasha oo lagu magacaabo Dheerey Shiikhey dheere oo ku hadlayay magaca ka qeyb galayaasha wuxuu sheegay in seddaxdii maalmood ee uu seminaarku socday ay uga dhigneyd seddax sano, isla markaana ay ku iloobeen inay guryahooda aadaan, isagoo u mahad celiyay shaqsiyaadkii iyo hay?adihii soo qabanqaabiyay seminaarkan.
Frazer waxay Dalka Mareykanka u Sameynaysaa Cadaw
iyadoo ku kaceysa khaladaad badan... Akhri...
Hooyo Saynab Yuusuf Xirsi waa Hooyo Soomaaliyeed oo muddo 3-Sano ku xanuunsan Magaalada Muqdisho. Mar aan ku booqday Guri ay degan tahay ayaa waxaan aad uga naxay sida ay u liidato Hooyo Saynab, waxaa dhowr jeer gacan siiyey Dadka dariska ah balse ma ?aheyn gacansiintaas mid kaafin kartay Hooyo Saynab oo markan la kulmayey ay ag fadhiyeen labo Caruur ah ay dhashay waxaa labadaas Caruur ah haatan quudiya Dadka dariska ah.waxaa haya haweeneydaan Gabar ay deris yihiin oo lagu magacaabo Canab Maxamed .
? kaalma yar oo ku soo gaarta ma?ahan mid ku kaafin karta, waxaas oo dhan waxaa igala wanaagsanaan lahaa anigoo hela Caafimaad buuxa? ayey tiri Hooyo Saynab oo markii hore ahayd Haweeney u xamaalin jirtay Caruurteeda waxay intaas sii raacisay? waxaan maanta goystay inaan isku dhiibo Bulsho waynta Soomaaliyeed ee ku nool Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba si ay Gacan Baniaadanimo ii siiyaan.
Hooyo Saynab waxay la taaheysaa Cudurka TB-da Caluusha waxayna waysay Cid gacan ku siisa kana daawaysa Cudurkaasi oo ah mid si sahal ah lagu daawayn karo, Hooyo Sayanab oo jir ahaan u dhamaatay ayey waxay ku hadlaysay Cod aad u daciif ah oo ka soo gu?ayay Caluusha aad baan uga naxay anigaaba ku sigtay in ay illin iga timaado ? waxaan ku iri Hooyo Inshaa?Allah waad caafimaadi doontaa waxaan kuu ogahay in Dadka Soomaailyeed ay yihiin Dadka isu naxariista isuna gargaara, inta ay Madaxa luxday ayey Tiri? iga gaarsii Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay Il naxariis ah igu eegeen, Hooyo Saynab Cid ahel u ah kuma sugna Magaalada Muqdisho waxay ii sheegtay in Dadkeeda ay ku sugan yihiin Magaalada Hargeysa.